Neymar oo xiriir la sameeyay Barcelona iyo codsi layaab leh oo uu u gudbiyay – Gool FM
Neymar oo xiriir la sameeyay Barcelona iyo codsi layaab leh oo uu u gudbiyay
Liibaan Fantastic March 9, 2018
(Barcelona) 09 Maarso 2018 Xiddiga PSG ee Neymar ayaa xiriir lama filaan ah la sameeyay maamulka kooxdiisii hore ee Barcelona oo si xun uu uga tagay suuqii xaggaaga.
Mundo Deportivo ayaa daaha ka qaaday in Neymar uu ka codsaday maamulka Barcelona in loo ogolaado inuu dib ugu soo laabto kooxda.
Laacibka reer Brazil ayaa u sheegay maamulka Barcelona inuu aad uga shalaaynayo go’aankii uu qaatay xaggaagii markaas oo uu doortay inuu u dhaqaaqo kooxda lacagta badan ee PSG.
Sidoo kale asxaabtiisa Barcelona oo uu si joogto ah ula xiriiro ayuu u sheegay inuu ahaa doqon markii uu doortay inuu ka tago kooxdiisii hore, wuxuuna rajaynayaa inuu helo wado uu ku imaan karo Camp Nou.
Neymar ma uusan filayn inuu dhibaato kala kulmayo qolka labiska ee PSG, wuxuuna u xiisay naxariista asxaabtiisii hore ee qolka labiska Barcelona.
Neymar ma doonayo inuu ku soo laabto Barcelona dhamaadka xiliciyaareed kaan, laakiin qorshihiisa ayaa ah inuu ku laabto Barca xaggaaga 2019, laacibka ayaana go’aan kaan qaatay ka hor intii uusan dhaawacmin.
Maamulka Barcelona kuma fikirayaan inay aqbalaan codsiga Neymar, taas badalkeeda waxaa jira xubno ka tirsan maamulka oo qaba fikir ah in laacibka dib loo soo celiyo si uusan ugu biirin Real Madrid.
Tobanka kulan ee uu macallin Max Allegri CL ka muujiyay tayadiisa macallinnimo + Sawirro
Mohamed Salah oo ay ka go'antahay inuu barri gool ka dhaliyo Manchester United (Ogoow sababta)